ရွှံ့များ၊ နုန်းများ၊ အမှိုက်များဖြင့် ဗွက်ပြင်ကျယ်ကြီးသည် မျက်စိတစ်ဆုံး ရှိနေ၏။ မည်သည့်အရာဟု မဖော်ပြနိုင် လောက်တော့သည့် အပျက်အစီး၊ အကျိုးအပဲ့များက နေရာအနှံ့တွင်တွေ့နေရသည်။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကတော့ ဘာမျှ မသိလိုက်သကဲ့သို့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိနေ၏။ ဟိုးအဝေးပျပျတွင် လူသုံးယောက် ဆန့်ကျင်ရာဘက်သို့ တရွေ့ရွေ့ လျှောက်သွားနေသည် ကို တွေ့ရ၏။ လှမ်းအော်ခေါ်လိုက်ချင်သော်ငြား ပါးစပ်ဖွင့်ဟဖို့ပင် ခံစားချက်မရှိတော့။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူရုပ်မပေါ် ပွယောင်းနေသည့်အသွင်ဖြင့် ပျံ့ကျဲနေသည့် အသက်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်များနှင့် လူ၊ တိရစ္ဆာန် အသေကောင်များကို ကြည့်မိတော့ အသက်နှင့်ခန္ဓာ ယှဉ်တွဲလျှက် ရှိနေသေးသည်ကိုပင် ခင်ညို ယုံရန်ခက်ခက်ဖြစ်နေသည်။ နဘေးနားတွင် ထိုင်နေသည့် ခင်မိကို သတိထားမိလျှင် ခင်ညိုရင်ထဲ ကြေကွဲဆို့နစ်လာရပြန်၏။ ဤနေရာတွင် နှစ်ယောက်သားထိုင်နေသည်မှာ တစ်နာရီမျှပင်မကတော့။ ၀မ်းဗိုက်ထဲ ဆာလောင်လွန်းသဖြင့် တကျုပ်ကျုပ် မြည်နေ၏။ လမ်းစပျောက်နေချေပြီ။ ခင်ညိုတဲဘေးက ခင်မောင်တို့မိသားစုလဲ အခုဆို ဘယ်ကမ္ဘာရောက်နေပြီမသိ။ မသိဆို ယခု ခင်ညိုတို့ လင်မယားရောက်နေရာနေရာသည်လည်း အဘယ်နေရာဆိုသည်ကိုပင် မမှန်းနိုင်တော့ချေ။ ထိုမျှမကသေးပေ။ ခင်ညို၏၀န်းကျင်တွင်လည်း အပျက်အစီးများက အနန္တ။ မြင်မြင်ရာ မျက်စိတစ်ဆုံး အနိဋ္ဌာရုံများက ထုနှင့်ဒေး။ ခင်ညိုနှင့် ခင်မိတို့၏ကမ္ဘာ ပြိုပျက်ခဲ့သည်မှာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပင် ရှိနေချေသေးသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ခင်ညိုတို့နှစ်ဦးသည် ကမ္ဘာအသစ်တစ်ခုသို့ ယခုမှပင် ခြေစချမိသူလို။ ခင်ညို၏ကမ္ဘာသည် ခင်ညိုမပိုင်တော့သလို။ ခင်ညိုနှင့်ခင်မိတို့ ရွှံ့ဗွက်ထဲ လဲနေသည့် အုန်းပင်စည်ပေါ်တွင် ငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြ၏။ ခင်ညိုက ခင်မိကို ငဲ့ကြည့် လိုက်မိသည်။ ခင်မိ၏အမူအယာက တုံဏှိဘာဝေ။ ရှေ့တူရှူသို့ မျက်တောင်မျှပင် မခတ်ပဲ ကြည့်နေ၏။ ထိုသို့ ကြည့်ပင် ကြည့်နေသော်လည်း ခင်မိ၏မျက်လုံးအိမ်ထဲတွင် ဘာမျှ မြင်ရသည့်ပုံမပေါ်။ ရွှံ့စရွှံ့နများ ပေကျံနေသည့် စိုစွတ်နေသည့် ဆံပင်ကျပ်ခဲနှင် မျက်နှာထက်ဝယ် မျက်ရည်မြစ်နှစ်စင်းက တသွင်သွင်စီးဆင်းလျှက်ရှိ၏်။ ခင်မိ၏ခါးတွင် မကြာသေးခင်ကပင် ခင်ညိုချွတ်ပေးထားသည့် ညစ်ပေစိုနေသည့် ခြေသလုံးဝက်ဘောင်းဘီတိုကို ၀တ်ထား၏။ အ၀တ်ကင်းမဲ့နေသည့် ခင်မိ၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင်မူ ရွှံ့ဗွက်တောထဲမှာ တင်ကျန်နေသည့် ပလတ်စတစ်အိတ်ကျွတ် အမည်းအပိုင်းအစကို အရှက်လုံယုံ ပတ်ပေးထား သည်။ ခင်ညိုကိုယ်တိုင်လဲ အပေါ်ပိုင်းဗလာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို သစ်ပင်၌ ငြိကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ပီနန်အိတ်ခွံ အစုတ်တစ်ထည်ဖြင့် ပတ်ထား၏။ ယခုအချိန်မှာတော့ ခင်မိအတွက်သာ ခင်ညိုစိတ်ပူသည်။ ခင်မိ၏ မျက်လုံးများက ကြောင်တောင်တောင်။ သတိပြန် ရချိန်ထဲက ခင်မိသည် သမီးလေးနာမည်ကိုခေါ်ကာ ပဋာမြေလူးအရူးတမျှ သည်းသည်းလှိုက်လှိုက် ရင်ပွင့်ထွက်မတတ် အကြိမ် မရေတွက်နိုင်အောင် ငိုကြွေးခဲ့ပြီးပြီ။ ယခုတော့ အမောဖြေနေပုံရ၏။ တဖန် ပြန်ငိုဦးမည်ဆိုလျှင် ခင်မိကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်း၍ တင်းတင်းဖက်ထားပေးယုံသာ ခင်ညိုတတ်နိုင်တော့သည်။ တကယ်တော့ ခင်ညို့၏မျက်လုံးအိမ်ထဲမှ မျက်ရည်စများကို ခင်မိကို မမြင်စေချင်ပေ။ Untitledခင်ညိုတစ်ယောက် ကြယ်မြင်လမြင်ဖြစ်နေသည့် လယ်တဲလေးကို ဓနိရွက်များဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စိတ်ပါလက်ပါ မိုးနေ၏။ ခင်မိက တဲမိုးဖို့ တိုက်တွန်းနေသည်မှာ ကြာလှပြီ။ သမီးလေး ဖြူဖွေးပင် ရှစ်လထဲရောက်နေပြီ။ သားဦးဖြစ်၍ ကျန်းမာသည့်သမီးငယ်လေးဖြူဖွေး၏ ချစ်စဖွယ်မျက်နှာက ခင်ညိုနဲ့ခင်မိတို့အတွက် အမေပြောသည့် အမောပြေဖြစ်နေရာ၏။ ခင်ညို့မိဘ လက်ငုတ်လက်ရင်း အမွေဖြစ်သည့် လယ်ကွက်လေးမှာ တဲထိုးပြီး လင်ကိုယ်မယား ဒိုးတူဘောင်ဘက် လယ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သမီးလေးဖြူဖွေးကို အိမ်ထောင်သက်ခြောက်နှစ်ကြာမှ ရခဲ့တာမို့ ခင်ညိုရော ခင်မိပါ သည်းသည်းလှုပ် နေမိသည်မှာ မထူးဆန်းတော့။ သမီးမွေးပြီးချိန်မှ ခင်ညိုလယ်က စပါးတွေအောင်သည်။ လူကြုံဖြင့် ထိုးခိုင်းလိုက်သည့် ထီဆုက ဆုသေးလေးပေါက်သည်။ သမီးလေးဖြူဖွေးမျက်နှာဖြင့် ခင်ညို့နှင့် သမီးဖြစ်သူကို သဘောမတူသည့်ယောက္မမကြီးက ခင်ညို့ကို စကားပြန်ပြောသည်။ မနက်က ရွာလယ်ကျောင်းမှ ဦးဇင်းကြီး လပွတ္တာကနေ ဆွမ်းစားပြန်လာချိန် `ချိန်ခါမဟုတ် မုန်တိုင်းဝင်မယ် ကြားတယ်၊ ဒီနှစ် မိုးများ စောမလားမသိဘူး´ဟု နေ့လယ်က ပြောသံ ကြားပြီးထဲ ကပင် အသင့်ပြင်ထားသည့် ဓနိများ ယူချလာပြီး တဲမိုးဖို့ အစပြုခဲ့တာ ဖြစ်၏။ `တဲမိုးမှာဖြင့် မိုးပါတော့၊ ကလေးကို နေပျောက်ထိုးလှတယ်´ဟု ခင်မိပြောနေတာလည်း ကြာနေလေပြီ။ ပို၍ သေချာသွားစေသည်က မနက်က မြစ်ဆိပ်ဘေးရောက်ချိန် ဟိုး…အရှေ့ဘက် ကောင်းကင်ပြင် တွင် နီရောင်သန်းပြီး ညို့နေသည့် တိမ်ဆိုင်များ၊ လေဖြင့် တရွေ့ရွေ့ နှင်နေသည်ကို မြင်ရချိန် ချိန်ခါမဟုတ်မိုး ရွာမည်ကို စိုးရိမ်စွာဖြင့် ခင်ညိုတစ်ယောက် မနက်စာစားပြီးထဲက တဲမိုးဖို့ ပြင်နေခြင်းဖြစ်၏။ အချိန်က နေမွန်းတိမ်းခဲ့ပေပြီ။ ဒီနေ့ ထူးထူးခြားခြား လေငြိမ်နေ၏။ ပုံမှန်ဆိုလျှင် မြစ်ကမ်းနား နီးသော သူတို့တဲ နေရာမှဆိုလျှင် မြစ်ရေပြင်ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်သည့် လေအေးအေးလေး၏ အတွေ့ကိုရတတ်သည်။အခုတော့ လေငြိမ် နေ၍ခင်ညို့တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးများဖြင့် စိုရွှဲနေ၏။ လေမတိုက်သော်ငြား ကောင်းကင်ပြင်စွန်းစွန်းတွင် အုံ့မှိုင်းနေသည်ကို တဲမိုးရင်းက လှမ်းမြင်နေရ ၏။ ခင်ညိုတို့တဲ၏ ခြေရင်းတဲက ကိုအောင်ဘ မိန်းမက `မိုးရွာမလားမသိဘူး၊ အုံ့မှိုင်းနေလိုက် တာ၊ လေက ငြိမ်တော့ အတော်အိုက်တယ်၊ ကိုအောင်ဘလဲ အခုထိ ပြန်မလာသေးဘူး´ဟု ထွက်ပြောသံကို ကြားရ၏။ နေ့လယ် သုံးနာရီလောက် တဲမိုးပြီးချိန်လောက်တွင် လေခပ်ပြင်းပြင်း စတင်တိုက်ခတ် လာသည်ကို သတိထားမိ လိုက်၏။ လေနှင့်အတူ မိုးစက်လေးများပါ တဖွဲဖွဲကျလာ၏။ ခင်မိက သမီးဖြူဖွေးကို နို့တိုက်နေရာမှ လှမ်းထားသည့် အနှီးစတွေကို ရုတ်ဖို့ လှမ်းပြော၏။ မြစ်နီးချောင်း ပါး နေလာသူများဖြစ်၍ မိုးမကြောက် လေမကြောက်၊ ဤမျှလောက် အခြေအနေက အခုလို နွေရာသီ ပူပြင်းနေပုံမျိုးဖြင့် အအိုက်ပင်ပြေသေးဟု ထင်မိသည်။ သို့သော် ကောင်းကင်တိမ်သားများက မိုးစက်မှုန်များကြားက ရုတ်ချည်းညိုမည်းလာ၏။ လေက ပြင်းပြင်းမွှေ့၍ ခင်ညို၏တဲနဘေးရှိ သရက်ပင်က ယိမ်းထိုးခါလာသည်။ တစ်ခဏ အတွင်းမှာ လေက ပြင်းလာရာ မွေးထားသည့် ကြက်မမိသားစုလည်း တဲအောက်သို့ ကသောကမျော ပြေးဝင်၏။ အ၀တ်လှမ်းရန် တဲနှင့်သရက်ပင်ကို သွယ်တန်းထားသည့် ကြိုးတန်းသည်လည်း ပြတ်ထွက်သွား၍ လွင့်သွားသည့် အနှီးများ၊ အ၀တ်များကို ခင်ညိုခမျာ ကမမ်းကတမ်းပင်လိုက်ကောက်ရ၏။ မြင်နေရသည့် မြစ်ရေမျက်နှာပြင်တွင် လှိုင်းကြက်ခွပ်ကြီးများ ရုတ်ချည်းပင် ယောက်ယက်ခတ် ဘောင်ဘင်ထ လာ၏။ “ဂျိန်း…. ဂျိန်း…၀ုန်း..” မိုးကြိုးတစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းပစ်ချလိုက်သဖြင့်ခင်ညို့သမီးလေးဖြူဖွေးခမျာ ထိတ်လန့်သွား၍လား မသိ၊ ၀ါးခနဲ ထငို၏။ ခြေရင်းတဲမှ ကိုအောင်ဘမိန်းမက ငါးနှစ်အရွယ်သားငယ်ကို ပုခုံးဖက်ထားလျှက် “ ကိုခင်ညိုရေ… မိုးတော့ အကြီးအကျယ် ရွာမဲ့ပုံပဲ၊ ရှင့်သူငယ်ချင်း ကိုအောင်ဘနှယ်၊ မိုးရွာမဲ့ဟန်မြင်ရင် စောစောပြန်လာတာမဟုတ်ဘူး၊ ကလေးက မိုးချိန်းသံ ကြားတော့ ကြောက်နေပြီ၊ တကတဲ လူကို စိတ်ပူပြီး မျှော်နေရအောင်လုပ်တယ်” ဟု ခင်ညိုတို့ တဲဘက်ကြည့်ရင်း လှမ်းအော်ပြော၏။ “စိတ်မပူပါနဲ့ မသီရေ… ပြန်လာမှာပါ… နင်တို့သားအမိ မိုးချိန်းသံကြောက်ရင် ငါတို့တဲဘက် လာနေလေ” ခင်မိက လှမ်းပြောလိုက်ချိန်မှာပဲ ပူပူနွေးနွေးမိုးထားသည့် ဓနိရွက်များက လေပြင်းပြင်း အတိုက်တွင် လွင့်ထွက်ကုန်တော့၏။ မိုးချိန်းသံက ဆက်တိုက် အဆက်မပြတ်။ မိုးစက်မိုးပေါက်များ က ရေလှောင်ထားသမျှ ဖောက်ထုတ်လိုက်သလို ဖျောခနဲ အုန်းခနဲ ရွာချလိုက် ၏။ လေအဟုန် မိုးအရှိန်ဖြင့် ဓနိအမိုးများ ဟိုသည်တစ်ရွက်စီလွင့်ကုန်ပြီ။ ခင်မိတို့တဲလေး အမိုး မလုံတော့၊ ရေတုတ်တုတ်ရွှဲကုန်လေပြီ။ ခင်ညိုနဲ့အတူ တစ်ဘက်တဲမှ မသီတို့ သားအမိနှစ်ယောက် တဲပေါ်ကို အပြေးအလွှားတက်လာ၏။ တဲကလေး တသိမ့်သိမ့် တုန်နေလေပြီ။ သမီးလေးကို ရင်ခွင်ထဲ ကျစ်ကျစ်ပါ ပွေ့ဖက်ထားရင်း၊ တဲပေါ်မှ လှမ်းမြင်လိုက်ရ သည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ခင်မိတို့အားလုံး မျက်လုံးများ ၀ိုင်းစက်ကုန်ရ၏။ မြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ် ကို ကျော်လွန်၍ လျှံတက်လာလေပြီ။ တဲမှ လှမ်းမြင်နေရသည့် ရေလှိုင်းလုံးများကြောင့် ကြောက် စိတ်တွေ ရုတ်ချည်းခိုတွယ်လာရ၏။ မြစ်ရေလွှမ်းလာသည်က ကမ်းပါးကိုပင် မမြင်ရတော့။ မသီက ဘုရားစာ တတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်းက ယောကျာ်းဖြစ်သူ ကိုအောင်ဘကို မျှော်၏။ မသီရဲ့သား အောင်မိုးက ကြောက်လန့်စိတ်ဖြင့် တအိအိငိုနေလေပြီ။ ခင်မိလည်း သမီးလေးကို ပွေ့လျှက်က ခင်ညို့ လက်မောင်းကို ဆုတ်ကိုင်ကာ တရိပ်ရိပ်တက်လာသည့် မြစ်ရေပြင်ကိုအံ့သြထိတ်လန့်စွာ ကြည့်နေမိ၏။ လေက အငြိုးတကြီး ၀ုန်းဒိုင်းကျဲတိုက်ခတ်လာသည်။ မိုးသီးမိုးပေါက်များက အလျဉ် မပြတ်တော့။ လေရောမိုးပါ သည်းသည်းထန်ထန်၊ သည်းသည်းလှုပ်လှုပ် ရှိ၏။ ၀ှီခနဲ၊ ရွှီခနဲ လေချွန်သံကဲ့သို့ အသံများနှင့်အတူ လေပြင်းမွှေ့လိုက်ရာ ခင်ညိုတို့တဲလေး ယိုင်ရာမှ စောင်းသွား၏။ အားလုံး တဲပေါ်တွင် ဖင်ထိုင်လျှက် ကျသွား၏။ “ အောင်မလေး… လုပ်ကြပါဦး.. တဲရှေ့ကပြင်အထိ ရေတွေ တက်လာပြီ” ခင်မိက ထိတ်လန့်တကြားအော်လိုက်၏။ သစ်ပင်ကျိုးသံများလား၊ သို့တည်းမဟုတ် တဲတွေ မြစ်ရေလျှံသည့်အထဲ မျောကုန်သည်လားမသိ။ ဖြောင်းခနဲ၊ဒိုင်းခနဲ၊ ၀ုန်းခနဲအသံများ ကြားနေရ၏။ ၀န်းကျင်တခွင်တွင် အုံ့ဆိုင်းမှိုင်းမှောင်သွားသဖြင့် သည်းသည်းကွဲကွဲ မမြင်ရတော့ပေ။ မြင်နေရသည်က ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် အားဖြင့်မာန်ဖြင့် အရှိန်ကောင်းစွာ စီးဆင်းနေသည့် မြစ်ရေအဟုန်။ တဲကပြင်မှတဆင့် တဲကြမ်းခင်းပါ ရေထဲ တဖြည်းဖြည်း မြုပ်လာ ချိန်တွင် ခင်ညိုတစ်ယောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခပ်သွက်သွက်ချရလေပြီ။ “ကဲ.. ခင်မိ..နင်က ကလေးကို သေချာပိုက်ထားပြီး ငါ့ဘောင်းဘီကို မြဲမြဲကိုင်လိုက်ခဲ့၊ ငါ့လက်တစ်ဘက်နဲ့ နင့်ကိုထိမ်းခေါ်သွားမယ်၊ မသီ.. နင်လဲ နင့်သားကို သေချာခါးထစ်ခွင်ချီလိုက်၊ ပြီးရင် ငါ့လက်တစ်ဘက်ကိုကိုင်၊ ငါတို့ ဒီတဲက အမြန်ခွာမှဖြစ်တော့မယ်” ခင်မိတို့ ဘာဆိုဘာမျှ ယူရန် အချိန်ပင်မရလိုက်ပေ။ အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုဖြင့် တဲကိုစွန့် ခွာရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက် ရေထဲသို့ အားလုံးခြေလှမ်းချချိန်တွင် ရေက ပေါင်လယ်လောက် ရောက်နေလေပြီ။ အော်သံဟစ်သံများကြားနေရ၏။အခြေအနေက တောင်မင်းကို မြောက်မင်း မကယ်နိုင်သည့် အခြေအနေ။ ခင်ညိုတို့ ရေထဲ ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် ခြေလှမ်းကာ မလှမ်းမကမ်း တွင် မြင်နေရသည့် သောက်ရေကန်ဘောင်ရိုးဆီသို့ ဦးတည်လိုက်၏။ အချိန်က ညနေငါးနာရီ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပြီ။ သို့သော် အချိန်ထက်ပို၍ ၀န်းကျင်သည် မှောင်ရိပ်သန်းနေ၏။ အရှိန်အဟုန်ကောင်းသည့် ရေစီးနှင့်အတူ မျောပါ မသွားစေရန် မနည်းထိမ်း၍ လျှောက်နေ ရ၏။ ရေစီးထဲတွင် အမျိုးအမည်မသိ အရာများပါ မျောပါနေ၏။ ပိုင်ရှင်မဖော်နိုင်သည့် နွား တစ်ကောင်လည်း ရေစီးဖြင့် ဒရောသောပါး မျောပါသွားသည်ကို တွေ့ရ၏။ သစ်ကိုင်းကျိုးများ၊ ၀ါးလုံးများ၊ အမှိုက် သရိုက်များဖြင့် မြင်ရာတဆုံး ကျယ်ပျံ့သည့် မြစ်ပြင်ကြီးဖြစ်လာ၏။ ကန်ဘောင်ရိုးပေါ်ရောက်ချိန်တွင် ခင်ညိုတို့တဲလေးသည့် မြစ်ရေ၏ သယ်ဆောင်မှုဖြင့် စတင်မျော နေလေပြီ။ ထိုစဉ် လူတစ်ယောက် သူတို့ရှိရာဆီ ရေကူးလာသည်ကို လှမ်းမြင်လိုက် ရ၏။ “ကိုအောင်ဘ” “အဖေ” မသီတို့သားအမိ အော်လိုက်သံနှင့်အတူ ကလေးကို ခါးထစ်ခွင်လျှက်က မသီတစ်ယောက် ကိုအောင်ဘ ရှိရာဆီသို့ ရေထဲမှ ဖြတ်ပြေး၏။ “ ၀ုန်း….” “အောင်မလေး… သေပါပြီ…. လုပ်ပါဦး ကိုခင်ညိုရယ်…လုပ်ပါဦး” ခင်မိ အသံကုန်ဟစ်လိုက်၏။ ကန်ဘောင်ပေါ်အထိ ရိုက်ခတ်လာသည့်ရေအရှိန်ကြောင့် ခြေမ ယိုင်ရန် တောင့်ခံ ထိမ်းထားချိန် မြင်လိုက်ရသည့်က အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းဖြင့် တက်လာ သည့် မြစ်ရေလှိုင်း။ ထိုရေလှိုင်းက ကိုအောင်ဘတို့ မိသားစုဆီ တည့်တည့်ဝင်တိုးရာ၊ မျက်စိအောက်တွင် သုံးယောက်သား ရေအောက်သို့ ရုတ်ချည်းမြုပ်ရင်း ပျောက်ကွယ် သွား၏။ မြစ်ရေပြင်သည် စီးဆင်းဆဲ၊ ကြမ်းတမ်းဆဲ၊ ရမ်းကားဆဲပင်။ မသီတို့ မိသားစုအား မြစ်ရေ က အဘယ်နေရာဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီ မသိပေ။ မျက်စိအောက်တွင် ဖြစ်သွားသည့် အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ခင်ညို သွေးပျက်သွား၏။ ခင်မိက သမီးလေးကို မလွတ်စတမ်းပွေံဖက်လျှက် ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်စွာဖြင့် ငိုကြွေးနေလေပြီ။ ရေသည် မကြာမီ ကန်ဘောင်အထိတက်လာပြီး၊ ကန်ဘောင်သည်လည်း အချိန်တစ်ခု တွင် ရေအောက်သို့ နစ်မြုပ်ရပေဦးမည်။ ခင်ညို တွေဝေနေ၍ မရတော့ပါ။ ခင်ညိုတို့ မိသားစု ယခုထက် ရေလွတ်နိုင်သည့် အမြင့်တစ်နေရာဆီသို့ ရွှေ့မှ ရပေတော့မည်။ ခင်ညိုနှင့်ခင်မိ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ ကောက်ရိုးပုံကြီးဆီသို့ ခဲရာခဲဆစ် ရေကူးကြပြန်၏။ သမီးလေးဖြူဖွေးလည်း ရေဖြင့် စိုနစ်နေလေပြီ။ လူနှစ်ရပ်နီးပါး ကောက်ရိုးပုံသည် ရေထဲတွင် ရင်ညွန့်လောက်အထိ မြုပ်နေလေပြီ ။ ပြေးစရာ မြေမရှိတော့ပေ။ ၀န်းကျင်တွင် ကောက်ရိုးပုံထက် မြင့်သည့်နေရာ မရှိတော့။ အသက်ဘေး လွတ်ရန် မည်သည်များက တွန်းအားပေးသည်မသိ။ ကောက်ရိုးပုံပေါ်သို့ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း တွန်းတင်တွယ်တက်ရင်း သုံးယောက်သား ကောက်ရိုးပုံထိပ်သို့ ရောက်ခဲ့ရ၏။ နေရာတိုင်းတွင် မှောင်နှင့်မည်းမည်း။ မိုးက သည်းထန်စွာ ရွာနေဆဲ။ လေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်နေဆဲ။ ကောက်ရိုးပုံထိပ်ကို ချိုင့်ခွက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီး သမီးလေးဖြူဖွေးကို ထိုချိုင့်ခွက်ထဲ ထည့်လိုက်၏။ ခင်မိက သမီးလေးဖြူဖွေး မိုးမစိုစေရန် အပေါ်မှ မှောက်အိပ်လိုက်၏။ တဖန် ခင်ညိုက ခင်မိပေါ်မှ ထပ်၍ ပြုတ်မကျစေရန် အုပ်မိုးဖက်ထားလိုက်၏။ ကျောပြင်ကို လာထိမှန်သည့် ပြင်းထန်သည့် မိုးစက်မိုးပေါက်များက ကျောက်ခဲစများဖြင့် အဆက်မပြတ် ပစ်ပေါက်ခံနေရသလိုပင်။ ကြောက်စိတ် ၀မ်းနည်းစိတ်ဖြင့် ငိုရင်းက သိမ့်သိမ့်တုန်နေသည့် ခင်မိ၏ခန္ဓာကိုယ် အတွေ့ကို ခင်ညိုသိနေရသည်။ ခင်ညိုမျက်လုံးမှလည်း မျက်ရည်များ ကျနေသည်လား။ ကိုယ်တိုင်ပင် မကွဲပြားတော့ပေ။ “ကိုခင်ညို လုပ်ပါဦး သမီးလေး အေးစက်လာသလိုပဲ၊ အသံမထွက်တော့သလိုပဲ..” မိုးတိတ်သွားသော်ငြား လေက ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်နေဆဲ။ မှောင်နှင့်မည်းမည်းတွင် တစ်ဦးမျက်နှာ တစ်ဦး မမြင်ရ။ ထို့အတူ သမီးလေးဖြူဖွေး၏မျက်နှာကိုလည်း မမြင်တွေ့ရ။ စမ်းတ၀ါးဝါးဖြင့် ငြိမ်သက်နေသည့် သမီးလေးကို ခင်မိက ကောက်ရိုးပုံချိုင့်ခွက်ထဲမှ ပွေ့ယူကာ ရင်ခွင်ထဲထည့် ရင်း ဖြူဖွေး၏အေးစက်နေသည့် လက်ဖ၀ါးလေးများကို အာငွေ့ဖြင့် အနွေးပေးကာ နွေးစေ၏။ ထို့အတူ ခင်ညိုကလဲ ဖြူဖွေး၏ ခြေဖ၀ါးလေးများကို လက်ဖြင့်ဆုတ်နယ်ရင်း အပူငွေ့ပေး၏။ အတန်ကြာ ဆုတ်နယ်အနွေးပေးရင်းက ဖြူဖွေး၏ ညည်းသံလေးထွက်လာ၏။ “တော်ပါသေးရဲ့…တော်ပါသေးရဲ့ သမီးလေးရယ်.. အမေက သမီးလေး အသက်ပါသွားပြီတောင် ထင်နေတာ” အရူးတစ်ယောက်လို တဖွဖွရွတ်လျှက်က ခင်မိက ဖြူဖွေးကို ခက်ခက်ခဲခဲ နို့တိုက်၏။ တကူးတကန့် အိကျီ င်္လှန်၍ နို့တိုက်ရန်မလို။ လေအရှိန်မိုးအရှိန် ပြေးရင်းလွှားရင်း ကူးခတ်ရင်းဖြင့် ခင်မိတွင် အိကျီ င်္ပင် မရှိတော့။ ထို့အတူ ခါးဝတ်လည်း နတ္တိပင်။ အသက်ဘေးရုန်းကန်နေရသည်နှင့် အဘယ်နေရာတွင် ကျွတ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်မသိ။ ခင်ညိုသည်လဲ ခြေသလုံးဝက် ဘောင်းဘီတို ချောင်နေသဖြင့် ခါးရှိ ခါးပတ်ကွင်းတွင် ပလတ်စတစ်ကြိုးထည့်ပြီး ချည်နှောင်ဝတ်ထားမိ၍သာ ကျွတ်မကျ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်က အရှက်ထက် အသက်က ပို၍ အရေးကြီးနေသောအချိန်ပင် မဟုတ်ပါလား။ ထိုစဉ် ခင်ညိုတို့ရှိနေသည့် ကောက်ရိုးပုံကြီး သိမ့်ခနဲ လှုပ်ရှားသွား၏။ ထို့နောက် ကောက်ရိုးပုံကြီး သည် ရေစီးအတိုင်း စတင်၍ တအိအိမျောတော့၏။ “ ကိုခင်ညိုရေ… ကျုပ်တို့ မျောနေပြီ.. လုပ်ကြပါဦး.. လုပ်ကြပါဦး.. ဘာမှလဲ မမြင်ရဘူး.. ကျုပ်တို့ သေတော့မယ်ထင်တယ်.. ကျုပ်သမီးလေးလဲ သေတော့မှာပဲ.. လုပ်ပါ ကိုခင်ညို.. သမီးလေးသေလို့ မဖြစ်ဘူးနော်..” ကောက်ရိုးပုံကြီးသည် မျောရာမှ အရှိန်ရလာကာ တဖြည်းဖြည်းမြန်လာ၏။ မျောပါနေသည့် နဘေးတွင် သစ်ပင် ထိပ်ဖျားများ ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ ကျန်ခဲ့လောက်အောင် အရှိန်က မြန်လာ ၏။ မှောင်မည်းနေသဖြင့် ဘာကိုမျှ မမြင်ရ။ မည်သည့် နေရာသို့ မျောနေသည်ကိုလဲ မသိရပေ။ မျောနေသည့် ကောက်ရိုးပုံထိပ်တွင် ခင်မိက ဖြူဖွေးကို အုပ်မိုး၊ ခင်ညိုက ခင်မိကို ထပ်မံအုပ်မိုး၍ ဖက်ထားလျှက်မှပါလာခဲ့၏။ ကောက်ရိုးပုံကြီးသည် မျောပါစဉ် လမ်းတလျှောက်ရှိ သစ်ပင်များဖြင့် ငြိမိတိုက်မိ၏။ ထို့နောက် တစ်ကြိမ်တိုက်မိတိုင်း နည်းနည်းစီ ပဲ့ပဲ့ထွက်လာရင်း တဖြည်းဖြည်းသေးလာ ၏။ လေက ပြင်း လွန်းသဖြင့် ရွှီခနဲ ၀ီခနဲ အော်မြည်လျှက်တိုက်နေရာ ကျောပြင်အနှံ့ အပ်သေးသေးလေးများဖြင့် အဆက်မပြတ် ထိုးစိုက်နေသလို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြင့် နာကျဉ်နေရ၏။ တစ်ကြိမ်တွင် ကောက်ရိုးပုံသည် သစ်ငုတ်တိုတစ်ခုဖြင့် ၀င်ငြိမိရင်း ဆက်မရွေ့ပဲချိတ်မိနေ၏။ ကောက်ရိုးပုံသည် ဆက်၍ခိုကပ် မနေသင့်လောက်အောင် သေးငယ်လာပေပြီ။ အခြေအနေမဟန်တော့သည့် အနှီကောက်ရိုးပုံကို စွန့်ခွာမှ ဖြစ်တော့မည်ကို ခင်ညို သိလိုက်မိသည်။ ဖြူဖွေးကိုပွေ့ပိုက်ထားသည့် ခင်သီ့ကို သစ်ငုတ်ပေါ်တွန်းတင်လိုက်ပြီး ခင်ညိုလည်း နောက်မှ လိုက်တက် လိုက်၏။ ခင်ညို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လေသည်။ သစ်ငုတ်ပေါ်ရောက်၍ များမကြာမီ ငြိနေသည့် ကောက်ရိုးပုံ သည် အစအနမျှပင် မမြင်ရတော့ပဲ ရေစီးထဲမျော ကာ မြင်ကွင်း မှ ပျောက်သွားတော့၏။ သစ်ငုတ်က လူတစ်ယောက်ဖင်ထိုင်စရာနေရာသာ ရှိသော်ငြား၊ ခင်ညိုနဲ့ခင်မိ ခက်ခက်ခဲခဲ ထိုင်နေရသော်ငြား၊ အခုလို အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်နေ ရသည်ကပင်ကံကြမ္မာ ကို ကျေးဇူးတင်ရပေမည်။ အေးစက်နေသည့်သမီးဖြူဖွေး၏ ခြေထောက်လေး များကို ခင်ညိုက သူ့ချိုင်းကြားထဲသို့ ထည့်ကာ နွေးထွေးစေ၏။ ခင်မိကလည်း လက်ဖ၀ါးလေးနှစ်ဘက်ကို နွေးလာအောင် ပွတ်ပေး၏။ သို့သော် သူတို့နှစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်က အ၀တ်ဗလာဖြင့် မေးရိုက်မတတ် ခိုက်ခိုက်တုန်နေ၏။ သစ်ငုတ်အခြေအနေ ခိုင်မခိုင် ခင်ညိုက ရေအောက် ဆင်း၍ စမ်းကြည့်ရာ ရေထဲ မျောမည့်အနေအထားမရှိ။ မြေတွင် ခိုင်ခိုင်မြဲ သည့် သစ်ငုတ်ဖြစ်နေ၍ သည်တစ်ညတေ့ာ သစ်ငုတ်ပေါ်တွင် မနက်မိုးလင်းရတော့မည်ဟု စိတ်ဒုံးဒုံးချကာ ခင်မိကို အိပ်စေလိုက်၏။ သူ့ကို မှီထားရင်း မှေးနေသည့် ရင်ခွင်ထဲကလေးနှင့် ခင်မိကို ကြည့်၍ သေကံမရောက် သက်မပျောက်သည့် သူတို့ အဖြစ်ကို အံ့သြနေမိ၏။ တဲအတွင်းရှိစဉ် မြစ်ရေစတင်တက်ချိန်က ကြားရသည့် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာ အော်ဟစ်သံများကို ပြန်တွေးမိရင်း ရွာကလူတွေ ဘယ်တွေရောက် ဘယ်တွေပေါက်ကုန်ပြီနည်း။ မည်သူတွေ သေ၍ မည်သူတွေ ရှင်သနည်း။ အိမ်နားက ကိုအောင်ဘတို့ မိသားစုရော သေမင်းက ခေါ်ဆောင်သွားလေပြီလား။ တွေးရင်းက ခင်ညို မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွား၏။ မိုးစဲသွားလေပြီ။ လေက ပြင်းပြင်းတိုက်နေဆဲ။ ရေစီးကလည်း ပြင်းပြင်းစီးဆင်းနေဆဲ။ သမီးလေးဖြူဖွေးက ဂါဝန်အနီရောင်လေးဖြင့် လှလို့နေသည်။ ခင်ညိုနဲ့ခင်မိက သမီးဖြစ်သူ ဖြူဖွေးကို လက်တစ်ဘက် တစ်ချက် တွဲထား၏။ သမီးလေးက ပါးပြင်ဖောင်းဖောင်း အိအိလေးဖြင့် ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလှသည်။ ခင်မိတို့သုံးယောက်သား ရွာဦးစေတီရှိရာသို့ ဦးတည် လျှောက်လာခဲ့သည်။ လှေကားထစ်များအတိုင်း စေတီရှိရာသို့ တက်လာခဲ့၏။ ဖြူဖွေးက လှေကားထစ်များ တက်ရသည်ကို ပျော်၍လားမသိ၊ တခစ်ခစ် ရယ်နေသည်။ တက်လာ လိုက်သည်မှာ တစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ်။ အို… လှေကားထစ်တွေက တက်လို့မဆုံးနိုင်တော့ ပါလား။ ခြေထောက်များပင် ညောင်းချိလာပြီ။ သမီးလေးလဲ ခြေထောက်တွေ ညောင်းနေတော့ မှာပဲ ဟု ခင်မိတွေးမိသည်။ ထိုစဉ် လှေကားနောက်ထပ် တစ်ထစ်သို့ ခြေအလှမ်း၊ ၊ခြေနင်း ရန် နေရာမရှိတော့ပဲ လေဟာနယ်ထဲသို့ သုံးယောက်သား နစ်ဆင်းသွားတော့၏။ ခန္ဓာတစ်ခုလုံး လှပ်ခနဲ အေးခနဲ။ ထိတ်လန့်သွားလျှက်က “အား” ဟု စီစီလောင်လောင်အသံဖြင့် ခင်မိ အော်ဟစ်လိုက်မိသည်။ ““““အား…””” စူးစူးနစ်နစ်အော်လိုက်သံကြောင့် ငုတ်တုတ်အိပ်ပျော်သွားရာမှ ခင်ညိုလန့်နိုးလာ၏။ ကြည့်လိုက်တော့ ခင်မိ မျက်နှာက ကြောင်စီစီ။
“ အိပ်မက်..အိပ်မက်… သမီးလေး..သမီးလေး…” “ အောင်မလေး.. ကိုခင်ညိုရေ.. မရှိတော့ဘူး… မရှိတော့ဘူး… လုပ်ပါဦး.. သမီးလေး မရှိတော့ဘူး…” ခင်မိ၏ မျက်ရည်လူးနေသည့်မျက်နှာ။ ထို့နောက် ဖြူဖွေး။ သမီးလေး ဖြူဖွေး ဘယ်ရောက်သွား သနည်း။ သစ်ငုတ်အစွန်းတွင် ငြိတွယ်ကျန်ရစ်နေခဲ့သည်က ဖြူဖွေးကို ထုတ်ပတ်ထားခဲ့သည့် အနှီးပိုင်းလေး။ ခင်ညိုသည် ခင်မိကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်း၍ ယောကျာ်းတန်မဲ့ ဟီးချကာ ငိုလိုက် မိတော့သည်။ ရောင်နီပျို့ချင်လေပြီ။ ကောင်းကင်တွင် ကျီးကန်းအာသံများနဲ့အတူ ကျီးကန်းများ ဟိုသည် ၀ဲပျံနေကြ၏။ ၀န်းကျင်တွင် ခင်ညိုနှင့်ခင်မိ၏ ငိုသံများ ပျံ့လို့နေ၏။ အဖေနှင့်အမေ ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်၍ ငုတ်တုတ်အိပ်ပျော်သွားချိန် ဖြူဖွေးလေး ရေစီးထဲ ပြုတ်ကျကာ အဘယ်နေရာသို့ ရောက်သွားခဲ့လေပြီနည်း။ အလင်းရောင်ပီသစွာ ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် လေရောမိုးပါ ငြိမ်သွားချေပြီ။ ထို့အတူ သူတို့နှင့် အတူရှိခဲ့သည် မြစ်ရေပြင်ကျယ်ကြီးသည်လည်း မျက်လှည့်ဆရာ မျက်လှည့်ပြ လိုက်သလိုပင် ယခု အဘယ်နေရာသို့ ရောက်သွားသည်မသိ။ ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် အော်သံ ခေါ်သံ အကူအညီတောင်း သံများ စတင် ကြားလာနေရပြီ။ ခေါင်းမွှေးစုတ်ဖွား ခန္ဓာအထက်ပိုင်းဗလာဖြင့် ဟိုထိုးဒီထိုး လက်ညှိုးညွှန်ရာသို့ ခင်မိအလိုတော်ကျ သစ်ကိုင်းတစ်ချောင်းဖြင့် ရွှံ့နွံထဲထိုးဆွ၍ သမီးရှာပုံတော်ဖွင့်နေရသည့် ခင်မိတို့လင်မယား ကို တွေ့မြင်နေရသည်မှာ ရင်နင့်စရာကောင်းလှပေသည်။ ပီနံအိတ်ခွံစုတ်ပတ်၍ ခင်မိလက်ကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားသော ခင်ညိုခန္ဓာကိုယ်မှ ချွေးများနှင့် အပြိုင် သူ၏မျက်ဝန်းမှ တလိမ့်လိမ့်ကျဆင်းနေသော မျက်ရည်များသည် အမှိုက်သရိုက်များ၊ လူသေကောင်များဖြင့် တစပြင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည့် ဗွက်တောထဲတွင် အသောမသတ်ကျဆင်းလျှက် ရှိသည်။
“ ဟိုမှာ.. ဟိုမှာ… တွြေ့ပီ… တွေ့ပြီ…”
ဆိုသည့် ခင်မိ၏ ဆောက်တည်ရာမဲ့ သမီးပျောက်အော်သံနှင့် အတူ၊ ခင်မိပြေးသွားသည့်နောက် သစ်ကိုင်းတစ်ချောင်းဖြင့် တကောက်ကောက် လိုက်နေရသည့် ခင်ညို့ကို ဘ၀တူဒုက္ခသည်များသာမက ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များကပါ မည်သို့သော အားပေးစကား ပြောကြားရမှန်း မသိအောင်ပင် ရင်နင့်ကြေကွဲစွာ ကြည့်ရင်း အားလုံး၏ရင်ထဲ မျက်ရည်မစဲအောင် ဖြစ်နေလေတော့သည်။ ။
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေ။
Posted by JACBA at 1:58 PM